घर » फुट्नु & Activators » पीसी लागि चिहानमा RAIDER फुट्नु को वृद्धि
पीसी लागि चिहानमा RAIDER फुट्नु को वृद्धि
द्वारा एमिली Kenzie | डिसेम्बर 12, 2016
पीसी लागि चिहानमा RAIDER फुट्नु को उदय साहसिक भिडियो खेल को एक मोड संग एक कार्य हो. खेल को कहानी त्यो Kitezh को दिग्गज शहर को खोज मा साइबेरिया मा उद्यम रूपमा लारा ाफ्ट निम्नानुसार. अमरता को शहरमा प्रतिज्ञा उनको पिटाई मा लक्ष्य लिएको छ कि एक अर्धसैनिक बल समाज लड्दै. खेल मुख्य रूप अस्तित्व र लडाई मा केंद्रित. यसबाहेक, एक खेलाडी पनि परिदृश्य अन्वेषण र विभिन्न वैकल्पिक tombs.Camilla Luddington आवाज फिर्ता rises र लारा रूपमा उनको भूमिका executes. खेलाडी लड्दै विरोधीहरूले जस्तै विभिन्न परिस्थिति मार्फत लारा नियन्त्रण गर्न, र पहेली मंच खण्डहरू खत्म. त्यो अघि बढाउन र कथा मार्फत मा जाने विभिन्न ग्याजेटहरू प्रयोग. यसबाहेक, लारा खेल मा उनको फाइदा गर्न वातावरण उपयोग गर्न सक्छन्. त्यो ब्रश वा रूखहरू मा लुकाउन सक्नुहुन्छ. थप रोचक Molotov ककटेल र makeshift grenades शिल्प छ, शत्रुहरू अलमल्याउन वस्तुहरु बाण शूटिंग गर्न.
Camilla Luddington आवाज फिर्ता rises र लारा रूपमा उनको भूमिका executes. खेलाडी लड्दै विरोधीहरूले जस्तै विभिन्न परिस्थिति मार्फत लारा नियन्त्रण गर्न, र खत्म पहेली मंच खण्डहरू. त्यो अघि बढाउन र कथा मार्फत मा जाने विभिन्न ग्याजेटहरू प्रयोग. यसबाहेक, लारा खेल मा उनको फाइदा गर्न वातावरण उपयोग गर्न सक्छन्. त्यो ब्रश वा रूखहरू मा लुकाउन सक्नुहुन्छ. थप रोचक Molotov ककटेल र makeshift grenades शिल्प छ, enemies.Additionally अलमल्याउन वस्तुहरु बाण शूटिंग गर्न, लारा traversing छत को शक्ति छ र पनि रूखहरू चढाई गरेर पूरै लड्न जोगिन सक्छौं. धनुष विभिन्न प्रकारका विशेष जनावर र सामाग्री जो लारा शिकार गर्न सक्नुहुन्छ र बचाउनु देखि प्रयोग गर्न गर्न सकिन्छ. लारा गरेको पेस्तोल, चढाई अक्षहरूमा र बन्दूक, आक्रमण राइफल आफ्नो भिन्न हरेक कार्य मा हो. चिहान RAIDER फुट्नु खेलको उदय मा नयाँ वस्तुहरू Melee वा अधम आक्रमण लागि एक शिकार चक्कु समावेश. एक पुन मोहलत पनि पानी अन्वेषण लागि थपिएको छ, र लक छानिने बन्द बाकसभित्र खोल्न र doors.Platforming मेकानिक्स ठाडो पर्खाल र पौडी विरुद्ध फर्वाडहरु कूद जस्तै एक साहसिक को भाग पनि हो. Lura को ट्रयापिज मा झूल रूपमा साथै भ्क्याल गर्न भ्क्याल देखि जम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ.
यसबाहेक, लारा traversing छत को शक्ति छ र पनि रूखहरू चढाई गरेर पूरै लड्न जोगिन सक्छौं. धनुष विभिन्न प्रकारका विशेष जनावर र सामाग्री जो लारा शिकार गर्न सक्नुहुन्छ र बचाउनु देखि प्रयोग गर्न गर्न सकिन्छ. लारा गरेको पेस्तोल, चढाई अक्षहरूमा र बन्दूक, आक्रमण राइफल आफ्नो भिन्न हरेक कार्य मा हो. खेल मा नयाँ वस्तुहरू Melee वा अधम आक्रमण लागि एक शिकार चक्कु समावेश. एक पुन मोहलत पनि पानी अन्वेषण लागि थपिएको छ, र लक छानिने बन्द बाकसभित्र खोल्न र doors.Platforming मेकानिक्स ठाडो पर्खाल र पौडी विरुद्ध फर्वाडहरु कूद जस्तै एक साहसिक को भाग पनि हो. Lura को ट्रयापिज मा झूल रूपमा साथै भ्क्याल गर्न भ्क्याल देखि जम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ. The rise of the tomb raider PC crack solves your problems. Here are some features of rise of tomb raider crack.
चिहान RAIDER फुट्नु खेल को वृद्धि उदेकलाग्दा सुविधाहरू छ
खेलाडी विभिन्न तीर प्रकार जस्तै आइटम सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ (विष, ग्रेनेड, डोरी, climbable, आगो) बोट र जनावर देखि सामाग्री scavenging द्वारा गेम कठोर वातावरणमा.
दुवै मानव र पशु वर्ण एक दिन-रात चक्र गर्न प्रतिक्रिया सक्नुहुन्छ.
जस्तै, यदि यो जाडो समय लारा एक hardier जाडो कोट सिर्जना गर्न जो केवल दिन को एक विशेष समयमा बाहिर आउँछ ब्वाँसो शिकार हुनुपर्छ
लारा उनको लडाई रणनीति थप्न हुनेछ जो पौडी खेल्न सक्छ.
छिटो समय घटनाहरू:
खेल मा घातक पासो जोगिन dodging गर्न र आक्रमण र काउन्टरहरू खत्म प्रदर्शन गर्न सक्छन्.
प्ले गर्न सजिलो:
यो संग चिल्लो चाल विकल्प खेल खेल्न एक आकर्षक र सजिलो छ.
सुन्दर परिदृश्य र सुन्दर स्थानहरू, पर्वतमा दृश्य, आदि. वास्तविक लागि भइरहेको सबै महसुस गर्न प्लेयर दिन. बनाउँछ खेलाडी मा थप मुछिन.
कसरि प्रयोग गर्ने & TOMB RAIDER को फुट्नु उदय
अब खेल डाउनलोड दिइएको बटन बाट
खेल निर्देशिका देखि दरार फाइल बदल्न
SpyHunter 4.28.0005 फुट्नु
Daemon Tools Lite 10.6.0.283 फुट्नु
FL स्टुडियो 12.5.1.5 फुट्नु
सदिश जादू 1.20 फुट्नु
← सानातिना 2.22.1 APK दरार वाइफाइ ह्याकर APK 2017 →
गैंडा5फुट्नु